လျှာတွင်ရှိသော အရသာခံဖုများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
လျှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အရသာခံဖုတွေကြောင့် မုန့်ကြွပ်ရဲ့အငန်အရသာကိုသိနိုင်သလို ရေခဲမုန့်ရဲ့အချိုအရသာ ကိုလည်း ခံစားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
အရသာခံဖုတွေဟာ ထိမှု၊ သိမှုတွေကိုခံစားနိုင်တဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ချို၊ ချဉ်၊ ဖန်၊ ငံ စတဲ့အရသာတွေကို ကောင်းစွာခွဲခြားပေးနိုင်ပါတယ်။
လျှာကိုသေချာစွာကြည့်ပါက အဖုသေးသေးလေးတွေမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းတို့ကို papillae လို့ခေါ်ပြီး အများစုမှာ အရသာခံဖုတွေပါဝင်ကြပါတယ်။ အရသာခံဖုတွေမှာ မွှေးညှင်းသေးသေးလေးတွေပါဝင်ပြီး ၎င်းအမွှေးတွေမှတဆင့် ဦးနှောက်သို့ အရသာနဲ့ဆိုင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေပေးပို့ပါတယ်။
ပုံမှန်လူတစ်ဦးမှာ အရသာခံဖုပေါင်း 10,000 ခန့်ရှိပြီး နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်အသစ်လဲလှယ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ပျက်စီးသွားတဲ့အရာသာခံဖုတွေနေရာမှာ အသစ်တွေ အစားမထိုးနိုင်တော့တာကြောင့် သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့အရသာခံဖုတွေ 5,000 ခန့်သာ ကျန်ပါတော့တယ်။ ဒါ့အပြင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာလည်း အရသာခံဖုအရေအတွက်တွေကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။
အရသာခံစားမှုအတွက် အရသာခံဖုတွေသာမက နှာခေါင်းကပါ ဝင်ရောက် အလုပ်လုပ် ပါတယ်။ နှာခေါင်းရဲ့အပေါ်ဆုံးအပိုင်းမှာရှိတဲ့ အနံ့လက်ခံတဲ့နေရာမှာ အထူးစပယ်ရှယ်ဆဲလ်တွေရှိပြီး အနံ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကို ဦးနှောက်သို့ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
အစာတစ်ခုခုကိုဝါးနေတဲ့အချိန်မှာ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေဟာ နှာခေါင်းဆီသို့ ချက်ချင်းရောက်သွားပါတယ်။ ၎င်းဓာတုပစ္စည်းတွေဟာ နှာခေါင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ အနံ့ခံနေရာကိုလှုံ့ဆော်ပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့် အရသာခံဖုတွေနဲ့အတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ပြီးတော့ အစားအစာတွေရဲ့အရသာ အမှန်ကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
အအေးမိနှာစေး၍ နှာခေါင်းပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် အစားအစာတွေဟာ အရင်ကလောက် အရသာမရှိတော့ဘူးဆိုတာ သတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နှာခေါင်းရဲ့အပေါ်ပိုင်းဟာ အနံ့အာရုံကို လက်ခံမယ့်နေရာကိုလှုံ့ဆော်မယ့် ဓာတုပစ္စည်းတွေကို ကောင်းစွာ လက်မခံနိုင် တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခါအစာစားတဲ့အခါမှာ နှာခေါင်းကိုပိတ်ထားကြည့်ပါ။ အရသာခံဖုတွေကြောင့် အစားအစာတွေရဲ့ အရသာကို သိနိုင်ပေမယ့်လည်း နှာခေါင်းပိတ်ထားတာကို ဖွင့်လောက်တဲ့အချိန်မှာလောက် တိတိကျကျမပြောနိုင်တာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ထို့ကြောင့် အစားအစာတွေကို အရသာရှိရှိစားသုံးခွင့်ရနေတဲ့အတွက် လျှာကိုသာမက နှာခေါင်းကို ပါ ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။
၁၈.၄.၂၀၁၈ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
စအိုပေါက်နားတစ်ဝိုက်မှာ ကွဲအက်ဒဏ် ဖြစ်တဲ့အခါ အင်မတန် အနေရခက်တတ်ပါတယ်။
ထိခိုက်မှုတွေကြောင့် စအိုကွဲနာ ဖြစ်နိုင်သလို အခြားရောဂါ အခြေအနေတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာ ဖြစ်လာခဲ့ရင် သတိထားသင့်ပါတယ်။
စအိုကွဲနာ ဖြစ်တဲ့အခါ အဓိကလ...
လက်တွေ ထုံကျဉ်နေတာ ဘာကြောင့်လဲ?
၁၇.၄.၂၀၁၈ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
လက်တွေ ထုံထုံကျဉ်ကျဉ် ဖြစ်နေတာဟာ အတော် နေရထိုင်ရခက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။
>> ဘာကြောင့် ဒီလို လက်တွေ ထုံကျဉ်နေရတာလဲ?
အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းတွေကတော့ -
1. Carpal Tunnel Syndrome...